अब पार्टीमा अध्यक्षज्यूहरुको मात्र हालिमुहाली हुँदैनः भीम रावल | Makalukhabar.com
साउन २०, काठमाडौं । कुटनीति मर्यादा तथा हाम्रो स्वाधीनताको दृष्टिबाट कुनै देशको गुप्तचरलाई ठूलाठूला पदमा बसेका र राज्यका महत्वपूर्ण पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले त्यसरी भेट्नु भनेको देशको शीर निहुर्याउने काम हो ।
खरो रूपमा राजनीतिमा उत्रने छवि बनाएका सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावल पार्टीभित्रै प्रतिपक्षी नेताको रुपमा चिनिन्छन् ।
उनले तत्कालिन एमालेमा रहँदा होस् या अहिले पार्टी एकतापछि नेकपामा रहँदा होस्, सरकारको सकारात्मक कामको प्रतिरक्षा र गलत कामको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसैले उनलाई पार्टीभित्रै पनि प्रतिपक्षीको आरोप लाग्दै आएको छ ।
नेकपाको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज समेत रहेका रावलसँग देशको स्थिति, नेकपाको राजनीतिक अवस्था तथा सरकारका कामकारवाहीका विषयमा मकालु खबरका संवाददाता श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः
सत्तारुढ नेकपाभित्र व्यक्ति हावी भएको चर्चा छ, सामूहिक नेतृत्व खलबलिएको हो ?
पार्टी एकीकरणपछि पार्टीका कमिटी रहेनन् । साथसाथै पार्टीको निर्णय प्रक्रिया प्रणाली नै खलबलियो । समस्यालाई सामूहिक रूपमा टुंग्याउँदै जाने गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । त्यसो नहुँदा समस्या भएको थियो । पछिल्लो समय सबै संरचनाहरु बनाइसकेका छौँ । तल्ला तहसम्म एकताले पूर्णता पाइसकेको छ । अहिले सामूहिक नेतृत्वमै पार्टी चलिरहेको छ ।
पछिल्लो समय पार्टीमा दुई जना अध्यक्षको मात्रै बढी हालिमुहाली देखियो नि !
पार्टी एकीकरणको विशिष्ट अवस्थामा दुई अध्यक्षज्यूको विशेष भूमिका हुनु आवश्यकता थियो । तर, कतिपय निर्णयहरू सचिवालय, स्थायी कमिटीबाट आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरेर जानुपर्ने थियो । यदि त्यसो गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन होला । अब पार्टीका हरेक निर्णण प्रक्रियामा सामुहिक निर्णय हुनेछ र त्यही अनुसार पार्टी अघि बढ्छ भन्ने हामिलाई विश्वास छ ।
पार्टीमा स्कूल विभागको पनि विवाद सुल्झिएको छैन । यसमा यति ठूलो विवाद हुनुको कारण के हो ?
हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनले निर्देशित गरेको क्रान्तिको कार्यदिशा तथा स्वाधीनताको बाटोमा कसरी जाने भन्ने विषयलाई एक नम्बरमा राखेको भए कुन विभागमा को व्यक्ति जान्छ भन्ने कुरा गौण हुन्थ्यो । तर, यी विषयमा छलफल नै छैन, ध्यानै छैन । त्यो भएपछि निजी हितका कुराले प्रश्रय पाउने भयो । त्यसकारण पार्टी स्कुल विभागको जुन विवाद गरिँदैछ, यो निजी हितकेन्द्रित विवाद हो । यसमा भन्दा राष्ट्रिय हितका विषयमा चर्चा गरेको भए हुन्थ्यो ।
यो सरकार दुई तिहाई बहुमतको सरकार हो । ५ बर्षको लागि बनेको छ । पछिल्लो समय सरकारमा नेतृत्व आलोपालोको विषय विवादमा आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जनताले नेकपालाई ५ बर्ष सरकार चलाउन स्ष्ट बुहमत दिएका छन् । हामीले जनताले दिएको बहुमतलाई कति सदुपयोग गर्न सक्छौं भन्ने परीक्षण पनि छ ।
पार्टी एकीकरण गर्दा जुन सहमति भएको थियो, सोही अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । यसबीचमा उहाँहरुले के–के सहमति गर्नुभयो, त्यसमा त हामी थिएनौँ । दुईजना साथीहरु साक्षी पनि बस्नुभएको थियो । त्यहाँ वास्तवमै के भएको थियो, उहाँहरुलाई नै थाहा होला । यस विषयमा हामी जानकार छैनौँ ।
पहिले आलोपालाकोे सहमति भएको हो भनेर प्रचण्ड ज्यूले भनिसक्नु भएको छ । अबको डेढ बर्षपछि ओलीज्यूले राजीनामा दिने र प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री बन्ने हो ?
सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने हो भने उहाँहरूको मात्रै होइन, पार्टी राजनीतिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ । सहमति भई हस्ताक्षर गरिसकेपछि पार्टीलाई जिम्मेवार दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दुई अध्यक्षकै देखिन्छ ।
यदी सहमति भएको हो र कार्यान्वयन नहुने स्थिति आयो भने ठूलो अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । ठूला समस्या ल्याउँछ । विगतको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हामीले देखेका छौं । त्यस्तो स्थितिको पुनरावृत्ति नहुन दिनका लागि हामी सबै विशेषगरी शीर्ष नेतृत्व सजग हुनुपर्छ ।
दुई तिहाई समर्थनको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि आम जनता निराश हुनुको कारण के होला ?
यो सरकार जुन बहुमतका साथ बनेको छ । जनताको पनि अपेक्षा ठूला छन् । तर यहाँले भनेजस्तो निराश नै त छैनन् । केही सुधार भने गर्नैपर्छ । त्यसलाई पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रियता, स्वाधिनता, अखण्डता जनताको हकअधिकार, संविधान कार्यान्वयनमा कहीँ पनि त्रुटि नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मैँले त्रुटि नहोस् भनेर पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छु । यसले सरकारलाई नै सहयोग भइरहेको छ । जस्तै पार्टी विधानका कुरा, नागरिकताको विषय ।
सरकारकोे कामकारवाहीको कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
धेरै कुराहरु गर्नुपर्ने छन्, धेरै काममा ढिलाई भएका छन् । तर धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् । चीनसँग पारवाहन सम्झौता, बजेट तयार गर्दा धेरै कुरा सच्चाइयो, नयाँ कानुन निर्माण भयोे । यी कुराहरु हामीले देखेका छौँ ।
फरक प्रसंगमा कुरा गरौँ, केही दिन अगाडी भारतीय गुप्तचर विभागका प्रुमख नेपाल आए । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटे भन्ने खबर सुनियो । तर यस विषयमा सरकारबाट आधिकारिक धारणा किन आएन ?
विगतमा कुनैबेला द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्ति प्रक्रियामा पुग्यौँ । सरकारहरु अस्थिर थिए । अब यत्रो बहुमत प्राप्त सरकार आइसकेपछि विगतका बाहृय हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरुलाई रोक्ने र स्वाधीनताको दिशामा गएनौं भने आजको पुस्ताले मात्र होइन, इतिहासमा भोलिको पुस्ताले पनि हामीलाई धिक्कार्नेछ । कुटनीति मर्यादा तथा हाम्रो स्वाधीनताको दृष्टिबाट कुनै देशको गुप्तचरलाई ठूलाठूला पदमा बसेका र राज्यका महत्वपूर्ण पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले त्यसरी भेट्नु भनेको देशको शीर निहुर्याउनु हो ।
कारले ३ वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिंदा १९ को मृत्यु